6 enganonyorwa dzemazita echikadzi ari kubudirira | Zvazvino Zvinyorwa
6 enganonyorwa dzemazita echikadzi ari kubudirira
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Novela, Nhema nhema, Romance novel
Ichimhanyisa uyu infernal Nyamavhuvhu iyo iri pakupedzisira kupfava, ini ndiri kuenda kunoonekana nekumwe kutarisa izvi 6 enganonyorwa. Ivo vakasainwa nemazita anozivikanwa e vanyori vemarudzi ese iine buri rayo ratosimbiswa panorama. Asi kune zvekare mamwe mashoma mazita akabudirira zvakare. Izvi ndizvo.
1 Mumoyo weiyo fjords - Christine Kabus
2 Quicksand - Malin Persson Giolito
3 Pamberi pemvura - Dinah Jefferies
4 Kushaya - CL Taylor
5 Damn Bhavhudhe - Marie-Sabine Roger
6 Mwanasikana Wenyuchi - Santa Montefiore
Mumoyo memafjords - Christine Kabus
Kabus akaberekerwa mu 1964 en Würzburg. Akave ari mutevedzeri wemutungamiriri, munyori wemitambo uye munyori wechiratidziro kune akati wandei terevhizheni. Aigara achifadzwa ne scandinavia nharaunda yekuve muverengi waAstrid Lindgren, pakati pevamwe vanyori vanobva munyika idzodzo. Asi zvirokwazvo aive akaroyiwa nemamiriro e Norway uye zvakanyanya zvekuti akatanga kudzidza mutauro uye kudzidza nhoroondo yawo. Mhedzisiro yave ino nganonyorwa ndiko kutanga kwake.
Tiri muna 2010 muna Wezvinhu. Lisa anobudirira kutora mifananidzo ChiGerman uyo, mushure mekufa kwamai vake, anogamuchira pasuru kubva kumhuri gweta. Izvi zvine antique medallion ine mufananidzo wevaviri vehondo, uye tsamba kubva kuna amai vake. Mufananidzo uyu uchamuendesa kuguta rakanyarara reNordfjordeid muNorway. Ndiyo chinhu chimwe chete yaLisa kuti azive kuti madzibaba ake aive ani chaizvo.
nekukurumidza - Malin Persson Giolito
Malin Persson Giolito akaberekerwa mu Stockholm en 1969. Gweta mukambani yemitemo yakakura munyika dzeNordic zvave zviripo European Commission mukuru muBrussels, maanogara nemurume wake nevanasikana vatatu. Akange atoburitsa mabhuku matatu, asi iri ndiro rave akadaro kubudirira muSweden uye yakatogadziridzwa mu 24 nyika. nekukurumidza Iye akasarudzwa Akanakisa Anonakidza eGore, iyo yepamutemo yekunyora mubairo yakapihwa ne Swedish Academy Yevanyori Vanyori.
Tiudze nezve kuurayiwa muchikoro kubva kune imwe yenzvimbo dzakanakisa muStockholm. Maja norberg, uyo akarasikirwa nemukomana wake uye shamwari yake yepamwoyo, anofungira uye akavharirwa nekubatanidzwa kwake mukurwiswa uku. Maja aive musikana akanaka uye ane mutoro kusvikira asangana Sebastian mutambi, mwanakomana wemabhirionea ane simba kwazvo muSweden. Inotyisa uye inopenya, Fagerman anomukwezva mukati uye anomupinza munyika ye vnzendo, zvikepe, mapato anodakadza, bonde uye zvinodhaka. Saka panguva ipi paakakundikana kuzvidzora? Ichokwadi here mhondi inotonhora kana mumwewo wechidiki akarasika?
Mvura isati yanaya - Dhina Jefferies
Jefferies munyori British akazvarwa muMalaysia ine nhoroondo refu. Iye zvakare munyori we nyaya uye zvinyorwa.
En Mvura isati yanaya takasangana na Eliza, mukadzi akazvimiririra kwazvo weBritish nzanga yemakumi matatu. Zviri mutori wemifananidzo uye, mushure mekufirwa nemurume mutsaona, anodzokera kuIndia pakukumbira yeBritish administration. Eliza anofanira kutora mifananidzo kumhuri yeMaharaja weRajputan uye nokuda kweizvi achagara mumuzinda wake. Asi rinenge risiri basa riri nyore.
Zvinopokana, kusagadzikana, kurangana vatambiEliza anongova nemumwe mubatsiri, Jayant, munin'ina anokwezva weMaharaja. Vaviri vanozoona kuti vanogovana zvinhu zvakafanana, asi hukama hwavo haunzwisiswe kana kutambirwa muiyo India yekoloni yemakumi matatu. Saka ivo vanofanirwa kusarudza chinzvimbo chekutora.
Kushaya - CL Taylor
Taylor akaberekerwa mu Worcester, United Kingdom, mukati 1953. Izvo zvave zviri muBrighton uko kwaakavandudza rake basa rehunyanzvi semufananidzo uye webhu dhizaini. Aive ne rakakura rakarova nepfungwa dzinonakidza Iyo mipendero yekunyarara (2014).
Iyi nyowani nyowani inotitaurira iyo kutsakatika kwevechiri kuyaruka, Billy Wilkinson, weiwo amai vake, ClaireAnonzwa mhosva, kunyangwe asiriye ega mumhuri. MaWilkinsons ese anochengeta zvakavanzika, asi Claire ane chokwadi chekuti shamwari dzake nemhuri havana chekuita nekutsakatika uku. Kana ndizvo zvaunofunga.
Damn rokuberekwa - Marie-Sabine Roger
Akazvarwa mukati 1957, munyori ChiFrench anogara muCharente uye anoshanda mu Ruzivo rwevadiki, aine mazita anodarika zana mune rake basa. Asi akazvisimbisa iye mumabhuku evakuru neanofadza Masikati angu naMargueritte, Iyo dzakashandisa mabhaisikopu pamwe Gérard Depardieu sezvo protagonist uye izvo zvandinokurudzira zvikuru.
Damn rokuberekwa anotiudza mune toni isina kujairika nyaya ye Mortimer DiFunto, uyo achazopemberera makore makumi matatu nematanhatu zvinosuwisa kwazvo. Uye ndizvozvo kubvira nakare kose zvose varume vemumhuri yake vashaya, pasina kusarudzika uye nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, nenguva dzegumi neimwe mangwanani e makore ake makumi matatu nematanhatu ekuberekwa.
Saka wakafa haana kumboita chero hurongwa uye arega basa. Asi, ndisingazive chikonzero, zuva iro rufu harusviki paari uye Mortimer anofanira kudzidza kurarama zvakare nekukahadzika kwakawanda nemibvunzo.
Mwanasikana wemuchengeti wenyuchi - Santa Montefiore
Montefiore mumwewo munyori british akaberekerwa mu 1970 nemanoveli akabudirira akati wandei pasi rese senge, Mumumvuri we ombú. Iyo yekupedzisira zvakare iri nyowani yerudo zita iyo yakagara iri pamusoro pematafura ekutengesa kuGreat Britain. Yakarondedzerwa kaviri, inotiudza nyaya ye vakadzi vaviri Vanozoona kuti kune nyaya dzerudo dzinozvidzokorora nesimba rakafanana zvisinei nemakore.
En 1973 Trixie valentine iye ari murudo nemuimbi weboka rakabudirira, Jasper Duncliffe waanoda kusununguka naye uye kurarama zvizere. Anoramba kuita saamai vake, mukadzi anoteedzana asina chimwe chinzvimbo kupfuura chengeta nyuchi, iyo inoita sekunge inotaurirana. Asi zvino Jasper anogamuchira nhau dzakaipa dzinomutungamira kuti adzokere kuEngland.
Uye mukati 1933 Nyasha hamblin Akakurira muWalbridge, England nababa vake, Muchengeti wenyuchi anobva kumhuri yepamusoro. Paanofa zvisingatarisirwi, anomusiya ega uye akarasika. Iye zvino abvaruka nepakati roora Freddie Valentine, rudo rwako rwehucheche uye shamwari, kana kuzvibvumira kutorwa ne kuda kwake Ishe Melville, rudo rusingabviri. Sarudzo yako ichava nemhedzisiro Makore makumi mana gare gare uye vese, amai nemwanasikana, vachatofanira kutarisana neyakavanzika yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 6 enganonyorwa dzemazita echikadzi ari kubudirira
_Mupurisa paMwedzi_. Rimwe dombo diki kubva kumufananidzo wekatuni Tom Gauld